အပူ-မေတ္တာရှင်တွားသွား: terrariums အတွက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဖြစ်ညှို့မြွေ
ရွံရှာသို့မဟုတ်ညှို့: လူချောင်မြွေများသောအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောတုံ့ပြန်မှု2။ မြွေ၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်စိတ်ဝင်စားတယ်နေကြသည်သူများသည်လူတွေကခဲ့သူတို့ရဲ့ဝမ်းအကြေးခွံများလှုပ်ရှားမှုအသုံးပြုပုံကျွမ်းကျင်စွာပြောင်းရွှေ့အခါ legless တိရိစ္ဆာန်များအလုံအလောက်ရနိုင်သည်။
အပူ-မေတ္တာရှင်တွားသွား: terrariums အတွက်ညှို့မြွေ
တစ်ဦး terrarium အတွက်မြွေ
မြွေလူတိုင်းအတွက်သာမန်မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမှအခြေခံအားဖြင့်ရှင်းပါတယ်သောဖြစ်ကြသည်။ ယခုပင်လျှင်အစားအသောက်များတွင်အတွက်မြွေ, ဥပမာ, ကြွက်, guinea ဝက်နှင့်ထောင်ပြီးယုန်ထက်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောထားရမည်ဟုပြသထားတယ်။
နှိပ်စိုးမိုးရေးနေထိုင်မှသာတိရိစ္ဆာန်များကိုစားကြလော့။ အစားအစာမရှငျပါဘူးရင်တောင် thawed နေ့ကအဟောင်းကြက်သို့မဟုတ်ပင်ရက်အနည်းငယ်ဟောင်းကြွက်သားစဉ်မြေးဆက်၏ဆုကြေးဇူးကိုအချို့နှင့်, အတွက်, ဥပမာ, စိုးမိုးရေးဖြစ်ပါတယ်။ လုံးလေးများသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ပန်းကန်၏ပုံစံကျွေးမွေးနိုင်သည့်ပုံမှန်အတိုင်းပြည်တွင်းတိရိစ္ဆာန်ဝတ်ရည်အတူပုံမှန်အတိုင်းသည်အဘယ်အရာထံမှရုံအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့။
မြွေ၏သဘောထားယေဘုယျအားဖြင့်အနည်းငယ်ပိုပြီးခက်ခဲပြီး guinea ဝက်၏သဘောထားထက်လည်းပိုပြီးစျေးကြီးသည်။ ဒါဟာအစကိုမိမိတို့အဘို့ကိုသိသိသာသာမြင့်မားတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ အပူဆီမီးခွက် (ဖြစ်နိုင်သည်အပူဖျာ) ၏လက်ရှိကုန်ကျစရိတ်နှင့်ရေးစပ်ပိုစျေးကြီး feed ကိုကနေခ။
အဆိုပါ terrarium အတွက်အစိမ်းရောင်မြွေ
တစ်ဦးကတာဝန်ယူမြွေပိုင်ရှင်တိရိစ္ဆာန်များသည်သူ၏ terrarium အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှလူနေမှုအခြေအနေများပေးထားပါတယ်။
ဒါဟာမရတိုင်းမြွေကောင်းစွာတူညီသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ခံစားရအဖြစ်မြွေမျိုးစိတ်များ၏ terrarium အဆင်ပြေအောင်ကြောင်းအရေးကြီးပါသည်။ terrariums အတွက်သစ်ပင်မြွေအမြင့်နှင့်အနံ၌ သာ. သွားရကြောင်းသက်သာခံစားရနေချိန်မှာမြေပြင်-နေသောမြွေတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောမျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့်အတူ terrariums ရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်။
မြွေကဒီအရောင်ရောင်စဉ်ရိပ်မိပြီးတော့လူသားမြားသဖွငျ့နှောင့်အယှက်မပေးမခံစားရထွန်းညှိနိုင်သောကြောင့်တစ်ဦးသည်မြွေ၏ညဥ့်လေ့လာရေးသည်, ထို terrarium ဒါမှမဟုတ်အပေါ်အနီရောင်အလင်းနှင့်အတူဆီမီးရှိသည်ဖို့သဘာဝကျပါတယ်။
အနာဂတ်မြွေကိုကိုင်ဆောင်သူအဖြစ်ကိုလည်း terrarium ကောင်းစွာလေဝင်လေထွက်ကြောင်းကိုသေချာရပေမည်။ တစ်ဦးကလုံလောက်သောလေဝင်လေထွက်ဟာလေဝင်လေထွက် slot နှစ်ခု secure, ဖောက်ထားသတ္တုစာရွက်သို့မဟုတ် Kunststoffgaze အားဖွငျ့အောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါစံပြလေဝင်လေထွက်မြင်ကွင်းနှစ်ခုလေဝင်လေထွက်ပေါက်တွေတွဲနေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။ အောက်ပိုင်းဒေသအတွက်တဦးတည်းအခြမ်းတွင်, အထက်ဒေသတွင်း၌ဆန့်ကျင်ဘက်ဘက်မှာ။
အများစုမှာမြွေမျိုးစိတ်ကြွင်းသောအရာများအတွက်ဆုတ်ခွာရန်, ဖုံးကွယ်ဖို့နေရာလိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင်တောင်တက်, အပူရေကူးဒေသများနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်မြွေကနေရေကူးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မယ့်ရေကိုယ်ထည်ကိုက်ညီ, မြွေပေါ် မူတည်. သင့်လျော်သော device ကိုဖြစ်ကြသည်ပါဝင်သည်။
အဘယ်သူသည်သင့်လျော်သောစည်းမျဉ်းအေဂျင်စီကအတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည် "အရပ်ရှည်ရှည်3ခွကေိုကျော်" နှင့် / သို့မဟုတ်အမျိုးအစားထဲမှာ "အဆိပ်" ကျမြွေကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုသည်။ အဆိပ်အပြင်းမြွေနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သောအခါ, အပြင်လည်းကိုက်ဘို့တန်ပြန်ယူအိမျတျော၌ထိရောက်သောတန်ပြန်သွေးရည်ကြည်ရှိသည်ကြောင်းအကြံပြုသည်။